ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်အတွင်း အမေရိကန်မှာ အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့်လျှောက်သူ ၁ ဒသမ ၄ သန်းရှိ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်အတွင်း အမေရိကန်မှာ အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့်လျှောက်သူ ၁ ဒသမ ၄ သန်းရှိ
POMPANO BEACH, FL - JUNE 03: Stephen Greene worksastreet corner hoping to landajob asalaborer or carpenter on June 3, 2011 in Pompano Beach, Florida. Employers in May added 54,000 jobs, the fewest in eight months, and the unemployment rate inched up to 9.1 percent. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်အတွင်း အမေရိကန်မှာ အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့်လျှောက်သူ ၁ ဒသမ ၄ သန်းရှိ
မတ်လနောက်ပိုင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကြောင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့် ရောက်ထားသူ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်က တိုးလာပြီး ၁ ဒသမ ၄ သန်း ရှိကာ ကပ်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေး အထိနာမှု ဆိုးရွားနေတာကို ပြနေပါတယ်။
အလုပ်လက်မဲ့တွေကို ဖက်ဒရယ်အစိုးရက ဒေါ်လာ ၆၀၀ ထောက်ပံ့နေမှုဟာ ဒီသီတင်းပတ်အတွင်း ရပ်ဆိုင်းတော့မှာဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုကာလမှာ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း ထိုးတက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်လက်မဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိနေသူ လူ ၃၂ သန်းခန့် ရှိတယ်လို့ အလုပ်သမားရေးရာဌာနက ပြောပါတယ်။ အခု ရေတွက်မှုဟာ တချို့ပြည်နယ်တွေမှာ နှစ်ကြိမ်ထပ်နေတာမျိုးတွေ ပါဝင်နေပြီး စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေကတော့ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းဟာ ၂၅ သန်းနီးပါးပဲ ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုငြးရပဈြ ကပရြောဂါမဖှဈခငကြ အမရေိကနြ ပှညထြောငစြုမှာ အလုပလြကမြဲ့ ခံစားခှင့ြ လွှောကထြားသူဟာ အပတစြဉြ လူ ၇ သိနြး ကွောလြေ့ မရှိပါဘူး။
ပွီးခဲ့တဲ့သီတငျးပတျအတှငျး အမရေိကနျမှာ အလုပျလကျမဲ့ ခံစားခှငျ့လြှောကျသူ ၁ ဒသမ ၄ သနျးရှိ
အလုပ်လက်မဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိနေသူ လူ ၃၂ သန်းခန့် ရှိတယ်လို့ အလုပ်သမားရေးရာဌာနက ပြောပါတယ်။ အခု ရေတွက်မှုဟာ တချို့ပြည်နယ်တွေမှာ နှစ်ကြိမ်ထပ်နေတာမျိုးတွေ ပါဝင်နေပြီး စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေကတော့ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းဟာ ၂၅ သန်းနီးပါးပဲ ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါမဖြစ်ခင်က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့် လျှောက်ထားသူဟာ အပတ်စဉ် လူ ၇ သိန်း ကျော်လေ့ မရှိပါဘူး။
Previous articleမာလီမှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာ ဖြေရှင်းဖို့ သမ္မတ ငါးဦး သွားရောက်
Next articleအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက လုပ်သားတွေကို ထိုင်း ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုမယ်